Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba Eziphambili zaseThailand » I-Thailand, uKhenketho, kunye neZiza eziBomvu eziMnyama: Iindaba ezimnandi
iindaba • Ukwakha kwakhona • Shopping • Iindaba Eziphambili zaseThailand • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Iindawo ze-COVID eThailand zongeza iZowuni eziBomvu eziMnyama
I-Thailand ayikulungelanga ukwamkela abakhenkethi nangaliphi na ixesha kungekudala. Ngokwanda okwahlukileyo kweDelta, uBukumkani buvalela amanye amaphondo- kwaye oku kunokuhlala inyanga yonke.
Urhulumente wase-Thai wandise ixesha lokuvala kunye nexesha lokufika kwiiveki ezimbini ezingaphezulu ukuqala ngolwe-Lwesibini kunye namanye amaphondo ali-16 ongezelelwe kuluhlu "lwemimandla emnyama ebomvu okanye ephezulu kunye nolawulo olungqongqo", iindawo ezihlaselwe kakhulu sisifo sikaCovid-19.
IZiko loLawulo lweMeko ye-Covid-19 (CCSA) liyalele ixesha lokubuya ekhaya ngentsimbi yesi-9 ukuya kweyesi-4 kusasa kunye namanye amanyathelo angqingqwa aya kwenziwa eBangkok nakwamanye amaphondo angama-28 eThailand iiveki ezimbini ukuqala ngomso.
I-CCSA kulindeleke ukuba iphinde ivavanye imeko yesifo kwakhona ngo-Agasti 18. Kusenokwenzeka ukuba kolunye ulwandiso lokutshixwa kude kube sekupheleni kwale nyanga kunokulindelwa.
I-CCSA iye yehlisa izithintelo kwiivenkile zokutyela nakwiivenkile ezinkulu kwiindawo ezimnyama ezibomvu, ebavumela ukuba bathengise ukutya ngokuhambisa kusetyenziswa amaqonga e-intanethi.
Izithintelo ezikhoyo kwimimandla emnyama ebomvu ziya kuhlala zikhona, kubandakanya ukuthintelwa kohambo phakathi kwamaphondo.
Nabani na ofuna ukungena kwimimandla ebomvu emnyama kufuneka abe nesizathu esifanelekileyo kwaye uya kuvavanywa ekungeneni.
Akukho ngaphezulu kwabantu aba-5 abavunyelweyo ukudibana.
Iindawo zokuthenga, iivenkile zesebe, kunye namaziko athengisa uluntu avaliwe ngaphandle kwevenkile ezinkulu, iikhemesti, nezikhululo zokugonya Akukho zinkonzo zothutho lukawonkewonke zifumanekayo ukusukela ngentsimbi yesi-9 ukuya kwele-4 kusasa. Amandla ezithuthi zikawonkewonke anqunyelwe kwi-50%
Abantu kumaphondo endawo ebomvu bomnyama bayabongozwa ukuba basebenze ekhaya.
Amanqanaba okumiselwa kunye nokuvalelwa emsebenzini anyanzelisiwe eGreater Bangkok - Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani naseNakhon Pathom, kunye namaphondo amane akumda osemazantsi wePattani, Yala, Narathiwat naseSongkhla ukusukela nge-12 kaJulayi.
IChon Buri, iChachoengsao, kunye neAyutthaya zongezwa kuluhlu ngoJulayi 20. Amanyathelo akhoyo ngoku azakuphelelwa ngoMvulo.
I-CCSA izolo yongeze amanye amaphondo ali-16 kuluhlu olumnyama olumnyama - Ang Thong, Nakhon Nayok, Nakhon Ratchasima, Kanchanaburi, Lop Buri, Phetchabun, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Prachin Buri, Ratchaburi, Rayong, Samut Songkhram, Saraburi, Sing Buri , Suphan Buri, kunye noTak.
Kwafunyaniswa ukuba amazinga osulelo eBangkok abonisa iimpawu zokucotha, ukubala i-39% yosulelo kwilizwe liphela ngelixa amazinga osulelo kwamanye amaphondo enyuka ngenxa yokwahluka kweDelta.
Urhulumente waseThailand uququzelela ukungenisa iyeza lokuthintela i-Russian Sputnik ukubonelela ngokugonya abasebenzi abaphambili.
Iingcali zempilo ziyavuma ukuba amazinga aphezulu osulelo eThailand anokuqhubeka kwiinyanga ezimbini ezizayo.
U-Thaniwan Kulmongkol, umongameli we-Thai Restaurant Association, wazamkela izigqibo ze-CCSA zokuvumela iivenkile ezinkulu ukuba zithengise ukutya kwi-intanethi.
Ilizwe libhalise i-18,027 yamatyala amatsha kunye ne-133 entsha yokufa kukaCovid-19 kwiiyure ezingama-24 ezidlulileyo.
Ngaba iimaski zibulala abantu baseMelika ngenene? Kuthekani ...